प्रसिद्ध दबाइ: को जीवनी र उपलब्धिहरू
रसायन विज्ञान - लामो समय को लागि आफ्नो दैनिक व्यवहार मा मान्छे सेवा गर्न कि विज्ञान हो। यो अनुशासन मानव सभ्यता अवस्थित सकेन जो बिना आधुनिक उद्योग मा एक विशाल भूमिका, खेल्छ। तर विकास यस्तो उच्च स्तर यो केवल कामहरू मार्फत हासिल गरेको छ चिरपरिचित वैज्ञानिकहरू, रसायन आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने।
Avogadro: बन्द प्रतिभा
सबैभन्दा प्रमुख दबाइ को छ Amedeo Avogadro। उहाँले परिवार आधिकारिक मा, इटाली जन्म भएको थियो। 1792 मा, त्यो आफ्नो व्यवस्था डिग्री प्राप्त। आफ्नो बुबा पनि व्यवस्था को क्षेत्र मा एक चिरपरिचित विशेषज्ञ थियो। विधायी क्षेत्र मा काम शुरू, Avogadro भौतिक र गणित को अध्ययन मा लगे आफ्नो मुक्त समयमा। मात्र 1820 मा उहाँले शारीरिक र गणितीय विज्ञान को प्रोफेसर को शीर्षक पाए।
समयमा प्रसिद्ध दबाइ उल्लेख Avogadro धेरै सुरक्षित मानिस, आफ्नो विचार धेरै तिनीहरूलाई स्पष्ट थिएनन् थियो। वैज्ञानिक सर्कलमा पहिचान Avogadro आफ्नो प्रसिद्ध सिद्धान्त, पछि "Avogadro व्यवस्था" को रूपमा जानिन्छ को पुष्टि पछि प्राप्त। Avogadro पनि धेरै रासायनिक तत्व सदस्य संख्या, यो आणविक वजन निर्धारण लागि विधि सिर्जना गरेको सेट।
जीवनी र अनुसन्धान चासो बयल
रसायन प्ले र उपलब्धिहरू रोबर्टा Boylya को विकास मा महत्वपूर्ण भूमिका। उहाँले आयरल्याण्ड मा जन्म भएको थियो 25 जनवरी, 1627। एक बच्चाको रूपमा, त्यो घर मा शिक्षित थियो, र त्यसपछि इटन स्कूल, विशेष धनी aristocrats को बच्चाहरु को लागि सिर्जना गर्न पठाएको थियो। 1656 मा रबर्ट बयल उहाँले भौतिक र रसायन आफ्नो चासो प्रकट गर्न थाले जहाँ अक्सफोर्ड, सारियो। त्यहाँ बयल जवान वैज्ञानिकहरू द्वारा विज्ञान आशक्त संग मैत्री सम्बन्ध स्थापित। सँगै तिनीहरूले जो पछि अक्सफोर्ड अनुसन्धान समाज भयो गोप्य समाज एक प्रकारको, सिर्जना गरेका छन्।
समयमा प्रसिद्ध दबाइ बयल विवाद रुचि थिएन पुष्टि, र अक्सर एक विनोदी वर्ण लगाएका भनेर पनि वैज्ञानिक विवाद बचा। बयल तथाकथित "प्राथमिक corpuscles" (आधारभूत कक्षहरू) र "दोस्रो corpuscles (जटिल शरीर) को अवधारणा गठन। आफ्नो पुस्तक "द संदेह chemist" पहिलो पटक बयल शीर्षक मा तत्व परिभाषित - "। मूल शरीर, प्रत्येक अन्य बाहिर आएको छैन जो" रसायन साथै बयल गरेको अनुसन्धान ओप्टिक्स, ध्वनि र बिजुली को क्षेत्रमा केन्द्रित।
अल्फ्रेड वर्नर को टर्नर परिवार मा डिसेम्बर 12, 1866 मा जन्म भएको थियो। प्राथमिक विद्यालय वर्नर देखि स्नातक पछि प्राविधिक विद्यालय प्रवेश र रसायन रुचि छ। उहाँले घर मा रासायनिक प्रयोग राख्न सुरु हुन्छ। साथै, युवा वैज्ञानिक मा साहित्य र पनि वास्तुकला रुचि। Chemist अल्फ्रेड वर्नर तथाकथित समन्वय सिद्धान्त आफ्नो लेखकत्व लागि नोबेल पुरस्कार सम्मानित गरियो। साथै, वर्नर एसिड र आधारमा को आफ्नै सिद्धान्त सिर्जना र आवधिक तालिका को आफ्नै संस्करण प्रस्ताव गरेको छ। 1913 मा उनले नोबेल पुरस्कार पाए।
रसायन विज्ञान मा उपलब्धिहरू Niels Bohr
सबै यो दिन संसारमा भन्दा प्रसिद्ध दबाइ Niels Bohr, भौतिक को क्षेत्र मा आफ्नो अनुसन्धान को लागि धेरै हदसम्म ज्ञात थियो को उपलब्धिहरू आनन्द। Niels Bohr क्वांटम सिद्धान्त हाइड्रोजन परमाणु सिर्जना गरियो। यसलाई मा, त्यो सुविधाहरू परिक्रमा इलेक्ट्रॉनों बताए र गणितीय अणु विभिन्न राज्य वर्णन गरे।
Niels Bohr एक बौद्धिक परिवार मा, कोपेनहेगन मा जन्म भएको थियो अक्टोबर 7, 1885। आफ्नो आमाबाबुको घरमा अक्सर सामयिक वैज्ञानिक मुद्दाहरू छलफलमा आयोजित थिए। विश्वविद्यालय कोपेनहेगन Bohr को मा अध्ययन गर्दा विज्ञान को डेनिस एकेडेमी को पदक प्राप्त गरेको छ। अन्य ज्ञात दबाइ - मुख्य रूप अर्नेस्ट रदरफोर्डले - Bohr प्रश्नहरू रेडियोधर्मिता तत्व र परमाणु संरचना अध्ययन गरेका थिए।
Svante Arrhenius - स्वीडेन ले रसायनविद्
रसायन को क्षेत्र मा अर्को प्रमुख शोधकर्ता - Svante Arrhenius। उहाँले अपसला मा जन्म भएको थियो फरवरी 19, 1859। 1876 मा उहाँले विश्वविद्यालय मा भर्ना, र छ महिना पहिले दर्शन मा एक डिग्री प्राप्त। 1881 देखि, Arrhenius भौतिकशास्त्र को स्टकहोम संस्थान मा electrolytes को जलीय समाधान को अध्ययन सुरु हुन्छ। 1903 मा, वैज्ञानिक को लेखक को लागि नोबेल पुरस्कार सम्मानित गरियो इलेक्ट्रोलिटिक dissociation को सिद्धान्त।
यो Arrhenius राम्रो-natured र हँसिलो वर्ण थियो कि ज्ञात छ। समयमा, त्यो मात्र होइन एक विद्वान रूपमा तर पनि खगोल विज्ञान र चिकित्सा मा पुस्तकहरु र लेख को लेखक रूपमा ज्ञात थियो। वैज्ञानिकहरूले लामो आफ्नो उपलब्धिहरू को रसायन पहिचान छ: उदाहरणका लागि, आफ्नो सिद्धान्त जोडले Mendeleev द्वारा आलोचना गरेका थिए। पछि यसलाई दुवै अनुसन्धानकर्ताहरूले को विचार नयाँ, तथाकथित प्रोटोन, सिद्धान्त रसायन मा आधारमा आधार फारम भनेर बाहिर गरियो।
मानिसको जीवनमा यो प्रकृति र महत्व: स्थिर चयन
चरा को स्नायु प्रणाली। चरा को स्नायु प्रणाली सरीसृप को स्नायु प्रणाली फरक छ?
यांत्रिक छालहरू: स्रोत, सूत्र को गुण
Cosmonaut Suraev Maksim: जीवनी (फोटो)
सिद्धान्त र शास्त्रीय उदाहरण को एक सिम्बायोसिस के हो
अपार्टमेन्ट भवन मा ताप लागि साधारण भागहरु
"स्पार्क" - प्यतिगोर्स्क को केन्द्र मा उपचार संग घर बोर्डिङ
Idler VAZ 2114: निदान र आफ्नो हातले प्रतिस्थापन
Jubilee परिदृश्य पुरुष 70 वर्ष
Futuland.ru - तपाईंको लागि उत्तम व्यापारिक मंच
रुचि को स्वतन्त्रता के भएको छ? विकल्प को उद्देश्य र आत्मपुरक वास्तविकता
व्यक्तित्व विकार: आदर्श, तर एक विकृति छैन
Cyanocobalamin (भिटामिन बी 12): मूल्य, समीक्षा, निर्देशन। भिटामिन बी 12 (Cyanocobalamin): उपयोगी गुणहरू
"Teplovsko उचाइ" - मातृभूमि को रक्षक को सम्मान मा एक स्मारक, द्वितीय विश्व युद्ध को ज्वारभाटा बारी
आफ्नो हातले कोठा soundproofing। आवश्यक सामाग्री सूची